Ukubuyekezwa Kwezemidlalo neCasino Thola Ibhonasi Engu-300% Yomdlalo
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se zemidlalo necasino ku inthanethi naku selula
Isibuyekezo se zemidlalo neCasino ku Inthanethi naku Selula
Isofthiwe:Rival, Betsoft, Saucify, Fugaso, Tom Horn Gaming
Ibhonasi Lokukwamukela:100 ama-spins wamahhala ayamukela ibhonasi
Ezemidlalo neCasino zibizwe ngokufanelekile kubhekwa ukuthi lokho abakunikeza kungxenyekazi yabo yikho kanye lokho – ukubheja kwezemidlalo nokudlala kwekhasino. Le yipulatifomu yemali yangempela yokugembula eyethulwe ngo-2018 ukubhekela isidingo esikhulayo samawebhusayithi okugembula ku-inthanethi ahlinzeka ngemidlalo yekhasino nokubheja kwezemidlalo ngaphansi kophahla olulodwa. Le nkundla ilungele abadlali abenza okokubili futhi abafuna ukukwazi ukusebenzisa i-akhawunti efanayo yomsebenzisi.
Ezemidlalo neCasino kuyisinqumo esiphezulu sabadlali abazinze eNingizimu Afrikah Africa. Kuyacaca ukuthi le nkundla igxile ezimakethe ezimbalwa ezisemqoka futhi iNingizimu Afrika ingenye yazo. Lokhu kusho ukuthi ikhasino inikezela ngezici ezahlukahlukene ezilingana kahle nezidingo ezijwayelekile abadlali baseNingizimu Afrika abazifunayo.
Okokuqala, abadlali beRainbow Nation bamukelekile ukuthi babhalise. Bangakwazi ukubhenka futhi badlale ngqo ngeRand laseNingizimu Afrika okubasindisa enkingeni yokuthi kufanele baguqule imali yediphozithi noma yokukhipha imali (lokhu kuyinkinga evamile abadlali baseNingizimu Afrika ababhekana nayo ezindaweni ezahlukahlukene zokugembula ku inthanethi). Ngaphezu kwalokho, ezemidlalo neCasino zinikeza umdlalo wezinketho zamabhange futhi eziningi zazo ziyaziwa futhi ziyaxhaswa eNingizimu Afrika.
Isigaba sekhasino sicebile futhi sihlukahlukene – empeleni asishiyi okuningi okufunakalayo. Uzothola imidlalo engamakhulu amaningana ezigabeni eziningi. Kukhona cishe imidlalo engaphezu kuka-500 yekhasino. Amanye ama-studios womdlalo ahlinzeka imidlalo kwezeMidlalo neCasino afaka phakathi iRival gaming, iBetSoft, iSaucify, iFugaso, iFelix Gaming, iTom Horn Gaming, iFresh Deck Studios, iDrama Gaming neQora Games.
2021 Amakhodi we Bhonasi Yokwamukela kwe Zemidlalo ne Casino
Idiphozithi yokuqala okungenani ye $25 (approx. R365) I-300% Ibhonasi Yomdlalo efinyelela ku- $ 1,500 (R22,155) + i-100 spins yamahhala kuzindawo ezikhethiwe
Idiphozi ephansi okufanelekele ibhonasi yokwamukelwa ngu- $ 25 (R365) noma inani layo elilinganayo kwezinye zezimali. Ibhonasi iyasebenziseka kuyo yonke imidlalo yekhasino ngaphandle kwemidlalo ye live dealer , ama-craps nama-progressives. Ama-spins wamahhala akhishiwe ayasetshenziswa ku-Mystic Wolf, ku-Five Times Wins naku-Jumping Jaguar. Ama-spins wamahhala akhishwa ngesilinganiso sama-10 spins wamahhala wezinsuku ze-10 ngemuva kokufuna ngempumelelo ibhonasi. Ibhonasi eyamukelekile ikhokhiswa ezimfuno zokubheja ezingama-30x idiphozi + nenani lebhonasi.
2021 Amakhodi Ebhonasi Angena Diphozithi kwe zemidlalo ne casino
Ipulatifomu yezemidlalo neCasino ayinayo ibhonasi yediphozi ngesikhathi sokubhala.
Amanye Amaphromoshini Akhethekile Anikezwa yiplatifomu Yezemidlalo neCasino
Ibhonasi ye-Crypto engu-500% Ibhonasi yediphozithi engu-500% uma ufaka ngeBitcoin noma enye i-crypto
Ngabe usugibele isitimela semali se-crypto okwamanje? Uma kungenjalo, ezemidlalo neCasino zikunikeza umfutho omuhle kakhulu wokwenza njalo ngebhonasi yabo ye-Crypto. Lapho wenza idiphozi encane ibe- $ 25 (R365) usebenzisa enye yezimali ze-crypto ezisekelwayo, uzothola ibhonasi yokufanisa engu-500%. Idiphozi enkulu yale bhonasi inqunyelwe ku- $ 500 (R7,385). Isamba semali esiphelele sinqunyelwe ku-10x inani lediphozithi kanye nemfuneko yokubheja edinga ukwaneliswa ukuze kukhishwe ibhalansi yebhonasi ingama-40x inani lediphozi + lebhonasi.
Ungangena kanjani futhi ubhalise ku-inthanethi epulatifomu Yezemidlalo neCasino
Njengoba ezemidlalo neCasino kuyipulatifomu yemali yangempela yokugembula enikela ngemidlalo yasekhasino nokubheja kwezemidlalo, kuphoqelekile ukuthi abadlali babhalise njengamalungu ukuze basebenzise izinsizakalo ezinikezwayo. Uma usuvele unayo i-akhawunti ye Ezemidlalo neCasino, ungangena ku-akhawunti yakho nganoma yisiphi isikhathi ngokumane uvakashele iwebhusayithi Yezemidlalo neCasino, ngokuchofoza inkinobho yokungena ngemvume bese uqhubeka ukufaka igama lomsebenzisi nephasiwedi yakho.
Kodwa-ke, uma ungenayo i-akhawunti, ungayakha. Inqubo iyashesha futhi kulula. Ukuze ubhalise, vakashela iwebhusayithi bese uqhafaza kuthebhu epinki ethi ‘Joyina Manje’ etholakala ekhoneni eliphezulu kwesokudla sekhasi lasekhaya. Uzoqondiswa kabusha kwifomu lokubhalisa okudingeka ulithumele nemininingwane embalwa yomuntu siqu. Eminye imininingwane odinga ukuyinikeza yile elandelayo: ikheli le-imeyili, faka igama lomsebenzisi, wakhe iphasiwedi, ufake igama lakho lokuqala, isibongo, usuku lokuzalwa, inombolo yeselula enezwe nekhodi lendawo, ikheli, idolobha, ikhodi yezwe, lizwe bese ukhetha imali oyithandayo.
Lapho usuyikhiphile yonke le mininingwane futhi wenza ukukhetha okudingekayo, kufanele uvumelane nesivumelwano selayisense lomsebenzisi wokugcina, imigomo nemibandela bese uqinisekisa ukuthi uneminyaka esemthethweni yokugembula endaweni yakho ngokuthikha ibhokisi bese uchofoza kokulandelayo . Manje kufanele ngabe ubhalise ngempumelelo i-akhawunti futhi ungaqala ukudlala imidlalo yekhasino noma ukubheja kwezemidlalo ku platifomu ye Sports neCasino.
Imidlalo ye-Casino eku-inthanethi Ungayidlala enkundleni yezemidlalo neyeCasino
Kunemidlalo ye-casino engaphezu kuka-500 e-Sports naseCasino futhi ivela kwabanye abathuthukisi begeyimu abaphezulu njenge-BetSoft ne-Rival Gaming phakathi kwabanye abambalwa. Noma ngabe usemidlalweni esuselwe kuma reel, emidlalweni yamakhadi netable, i-video poker, ama-progressive jackpots noma imidlalo ye live dealer, uzothola inqwaba yezinketho ngaphansi kwalowo nalowo mikhakha.
Amanye amabhonasi nama promoshini aqonde ngqo emidlalweni ethile nama slots ngakho-ke unake okunikezwayo okunjalo.
Spina Ama Reels usuku lonke nama Slots
Kunamathani wemidlalo yemishini yokugembula ongadlula kuyo. Ungakhetha kumatimu, olayini bokukhokha, izici zebhonasi nokunye okuningi. Izikhala zamavidiyo, ama-classic 3 – ama-reel slots nama-jackpot slots atholakala ngokwanele. Ezinye zezintandokazi zethu kule pulatifomu yiRise of Poseidon, Kate’s Waddle, Mystic Wolf, At the Copa and Secret life of Cats.
12 Yemi dlalo eya duma kakhulu ye Table
Isigaba semidlalo yetafula sisebenza kancane. Kukhona izihloko zemidlalo yetafula eziyi-12 ezifakiwe ngaphansi kwalesi sigaba. Sincoma ukuthi kuzanywe i-American Roulette, Blackjack, Baccarat, Pai Gow Poker, Red Dog kanye neKhadi Clash.
Imidlalo yama live dealer evela ku Fresh deck Studios
Isitudiyo esibukhoma sinikwa amandla yiFresh Deck Studios. Uma ufuna ukuxhumana ne dealer yangempela yomuntu ngenkathi udlala imidlalo yeRoulette neBlackjack, ungahle uthokozele indawo yokwamukela izivakashi ebukhoma ye-Fresh Deck endaweni yesikhulumi seSports neCasino. Ukusakazwa kwevidiyo kukhwalithi ye-premium ye-HD. Imidlalo embalwa ye live dealer edumile endaweni yokwamukela izivakashi bukhoma yi-Auto Roulette, i-European Roulette, i-Russian Blackjack, i-Blackjack 14 ne-Blackjack VIP.
Imidlalo ye-Poker engu-14 oyikhethayo
I-Video Poker ithandwa kakhulu ngabadlali kepha amakhasino amaningi anezinketho ezimbalwa ze-poker ezixubene nezinye izigaba noma ahlukaniswe nje ngaphansi ‘kokunye’. Ezemidlalo neCasino akuyona enye yekhasino enjalo, banesigaba esinikezelwe i-video poker enezinhlobo ezi-14 ezahlukahlukene zamavidiyo we-poker okufanele zihlolwe. Okunye ukukhetha okuphezulu lapha yi-Aces ne Faces, iDeuces wild, i-Double Joker, i-Jack noma i-Better, futhi ne tens noma i better.
I-Sportsbook egcizelela amaligi ezemidlalo ase-US adumile
Isigaba sezemidlalo sikhulu nje futhi sinambitheka njengengxenye yekhasino. Kodwa-ke, kubonakala sengathi kugxilwe kumaligi ezemidlalo ase-US afana neNFL, NBA, MLB neNHL. Uzothola nezinye izimakethe eziningi zezemidlalo. Abaphenyi abathanda ukubheja ibhola bazokuthokozela ukuthi amaligi ebhola lezinyawo avela kuwo wonke umhlaba akhona.
35 wama-Jackpots azonyakazisa amasokisi akho
Isigaba seJackpot Slots e-Sports naseCasino kulapho uzothola khona imidlalo ephezulu engashintsha impilo yakho ibe ngcono ngobusuku obubodwa. Abadlali abaningi basukile ezigugwini baya engcebweni ngezinye zalama progressive jackpots lapho inani le-jackpot kwesinye isikhathi lingafinyelela izigidi zamadola. Ama-jackpots ambalwa aqhubekayo esiwancomayo yiCyberpunk City, One Million Reels BC, Strike Gold kanye ne-A Night with Cleo.
I-Pinnacle Mobile Casino: Ipulatifomu Yezemidlalo neCasino Iqhathaniswa Kanjani Kuselula?
Iwebhusayithi yezemidlalo ne-Casino ilungiselelwe ukubukwa kweselula nokusebenza kweselula. Njengoba kunikezwe ukuthi iwebhusayithi iyaphendula futhi isebenza ngaphandle komthungo kumadivayisi ahlukahlukene eselula, asikho isidingo sohlelo lokusebenza lweselula oluzinikele futhi lokhu kuchaza ukuthi kungani ama-opharetha engazange azihluphe ngokushicilela uhlelo lokusebenza lweselula.
Iwebhusayithi ephathekayo inokubukeka okufanayo nokubukwa okuphelele njengewebhusayithi yedeskithophu. Ukusebenza kokuthinta kusebenza kahle kuyo yonke imidlalo yeselula namakhasi ewebhu weselula. Esikhundleni sokubonisa izithonjana zemidlalo ezinhlanu zilandelana, amakhasi ewebhu weselula abala izithonjana ezi-2 zawo wonke umugqa.
Ukudlala kwi-smartphone noma kuthebhulethi akubandakanyi ukwenza noma yikuphi ukuyekethisa. Abadlali beselula banokufinyelela ebangeni eligcwele lokukhushulwa, izinketho zebhange, ukwesekwa kwamakhasimende nemidlalo. Eminye imidlalo ingaba yinselele ukuyidlala kuselula, ikakhulukazi kuma-smartphones amancane. Imidlalo embalwa esiyincomela ukuthola isipiliyoni semidlalo yeselula engenakuqhathaniswa yi-Pot of Gold, The wicked witches , iPanda Party, neMighty Aphrodite.
Ngingayidawuniloda yini ipulatifomu Yezemidlalo neCasino kuselula yami?
Cha, alukho uhlelo lokusebenza noma i-app olulandekayo olutholakalayo. Ungadlala kuselula ngaphandle kohlelo i-app lokusebenza njengoba kuchaziwe esigabeni esingenhla.
Izindlela Zokufaka Idiphozi Nezokuzikhipha Zemukelwa ku platifomu ye-Sports and Casino
MoneyGram Yebo Cha -
Ria Yebo Cha -
Remitly Yebo Cha -
Bitcoin cash Yebo Cha -
Litecoin Yebo Cha -
Interac Transfer Yebo Cha -
Interac Money Transfer Cha Yebo Izinsuku ezi 3 - 5
Paper Check Cha Yebo Izinsuku eziyi 7 - 10
Bank Wire Transfer Cha Yebo Izinsuku ezi 3 - 5
Inkundla yezemidlalo neCasino Inhlangano nolwazi lokuxhumana
Kusungulwe: 2018 Inombolo yamahhala ye-SA: Cha
Opherethwa ngu: Akwaziwa E-mail: [email protected]
Ilayisensi: Isiphathimandla Sokugembula se-Malta Ingxoxo Esheshayo: Yebo
Ayikho inguqulo Yokudawunilodwa: Yebo Iwebhusayithi: Chofoza lapha
Buhle nebubi Bezemidlalo neCasino platform
Imidlalo engu-500 + yekhasino
I-sportsbook ephelele enezemidlalo yase-US neminye imidlalo yezwe
Ukubhanka ngqo nge Randi lase Ningizimu Afrika
Ukusekelwa kwezimali eziningi ze-crypto
Imininingwane ye-opharetha ayishicilelwanga kuwebhusayithi
Imininingwane yelayisense ayishicilelwe
Alukho uhlelo lokuthembeka
Ibhuku lezemidlalo litholakala kuphela emazweni athile
Yini eyenza ipulatifomu yezemidlalo neyekhasino ibe yinto ekhethwa kakhulu ngabadlali bakuleli?
Ukubhejela ezemidlalo nokudlala kwekhasino kwiphakeji elilodwa
Ama ligi webhola avela emhlabeni wonke ayatholakala ngokubheja
Imidlalo engu-500 + yekhasino efaka imidlalo eqhubekela phambili neyomthengisi bukhoma
AmaRandi aseNingizimu Afrika asekelwa
Uhlelo lokuthembeka olunomvuzo
Ibhonasi Yokwamuukela enkulu
Izimali ze-Crypto ziyasekelwa
Inkundla yezikhalazo ze Sports neCasino zaseNingizimu Afrika
Imininingwane ye-opharetha nemininingwane yokulayisense ayibonisi lutho
Akukho Ukusekelwa Kwefoni
Ingabe Ipulatifomu Yezemidlalo neCasino isemthethweni eNingizimu Afrika?
Njengoba ezemidlalo neCasino kungumhlinzeki wemidlalo yasogwini olwandle ongatholakali ngaphakathi kwemingcele yezwe laseNingizimu Afrika, imithetho yaseNingizimu Afrika ayinamthelela kuleli sayithi. Abadlali baseNingizimu Afrika bangadlala lapha ngaphandle kwezingqinamba zomthetho.
Ngikhipha Kanjani Imali Kwipulatifomu Yezemidlalo neCasino?
Ungenza ukuhoxa kwakho ngokuvakashela isigaba se-cashier, ukhethe indlela oyikhethayo yokuhoxa, ufake inani lokukhipha, ufake eminye imininingwane yasebhange njengoba uceliwe bese uqhubeka ukuqedela ukuhoxiswa.
Yini ipulatifomu Yezemidlalo neCasino?
Ezemidlalo neCasino yiwebhusayithi yokubheja yezemidlalo ku inthanethi kanye nekhasino lapho ungadlala khona ngemali yangempela. Ezemidlalo neCasino zisuselwa ngaphandle kweMalta futhi zinikezwe ilayisense yiMalta Gaming Authority.
Ubani Ophethe ipulatifomu Yezemidlalo neCasino?
Ngeshwa, lolu lwazi alutholakali ngalesi sikhathi.
Ingabe ipulatifomu Yezemidlalo neCasino Inezici Zokubheja Ezemidlalo
Yebo, enye yezinsizakalo eziyinhloko ezinikezwa yileplatifomu yilezo zokubheja kwezemidlalo. Ungabheja ku-NBA, NFL, NHL, naku-MLB, kumaligi ebhola lezinyawo emhlabeni jikelele, nakwamanye amaligi amaningi ezemidlalo.
Yebo, uhlelo lwe-VIP lubizwa ngokuthi ‘iMysportsandcasino Rewards’. Lolu uhlelo lwe-4-tier olunamazinga we-VIP – Ilungu lomvuzo, amaRewards plus, iVIP neHigh Roller. Isebenza ohlelweni lwamaphoyinti lapho uhola khona amaphuzu kuwo wonke ama-wager wemali yangempela.
Imfuneko yokubheja ingahluka kusuka kubhonasi eyodwa kuya kwenye. Ibhonasi yokwamukela inesidingo sokubheja esingu 30x idiphozi + nenani lebhonasi.